Safiirka Imaaraadka Carabta u Fadhiya Somaliya oo Garowe soo Gaaray – Radio Daljir
Diseembar 27, 2015 7:31 b 0
Axad, December 27, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta 27-Dec-15 hoyga uu ka deggan yahay Qasriga Madaxtooyada Puntland ee Garoowe waxa uuku qaabilay Safiir Waddanka isu-tagga Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaliya Maxamed Al-Cutmani.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Safiirka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa kulan kooda wax-yaabihii ay kaga wada hadleen waxaa kamid ahaa xoojinta Xidhiidhka iskaashi ee qotada dheer ee kadhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Puntland, iyo dardar gelinta Mashaariicda Horumarineed ee Dawladda Imaaraadku kawado Puntland.
Safiirka Imaaraadka Carabta Maxamed Al-cutmani ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland ku ammaanay adkaynta Nabad gelyada iyo barnaamijyada horumarineed ee wax ku oolka ah ee xukuumaddiisu ay ku tallaabsatay muddadii labada sano ahayd ee ay xilka haysey, isagoona ballan qaaday in ay dardar gelinayaan sii xoojinta mashaariicda horumarineed ee Dawladda Imaaraadku kawado Puntland welibana uu daba gal dheeraad ah ku samayn doono halka ay marayaan Mashaariicdaasi.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa geestiisa uga mahadceliyey booqashadan uu ugu yimi safiirku isagoona ku ammaanay kaalinta weyn ee dhanka horumarka ee Dawladda imaaraadku kuleedahay guud ah dalka soomaaliya isagoona si gaar ah uga mahadceliyey mashaariicda horumarineed ee Dawladda Imaaraadku fuliso Puntlad.
Sidoo kale Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Safiirka ku boorey dar-dargelinta mashaariicda horumarineed ee ay dawladda Imaaraadku kawaddo Puntland kuwaas oo wax badan kabadeley xaaladda nabad-gelyo iyo mida horumarineed ee Puntland.
Gebe-gebadi Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safiirka Imaaraadka Carabta ku casumey inuu kala soo qayb galo xafladda xadhig kajaridda Garoonka Caalamiga ah ee diyaaradaha ee Boosaaso oo xarigga laga jari doono 8-January-2015.